Yaadanoo Ebbisa Addunya (30.8.2016) -
Yaadanoo Ebbisa Addunya (30.8.2016)
bilisummaa September 1, 2016	Leave a comment
Ebbisan waggaa digdama harra uttuu innii mana issa siree isaara rafuu, loltuun mootummaa kolonefata Habasha, warra gartuu haarra Tigrai’in gegefamuun rasaassa itti roobsani lubuu isa muchumaati kutan. Biyya akaakile isaati, diini daanga Oromiyya ceete dhufte dhiiga Oromoo hammaa haraati iddoo hundaati dangalaasa jirti.
Akkuma Oromoon hunduu beeku, kan diini kun ajjesu moo beeka, sooresa, artistoota, oladeema/ oladeemtu, kan ta’ani kunis aggaamsaa sanyii duguugu -targeted genocide jedhama. Imaammati gartuu Tigrai (TPLF) saba Oromoo doofaa, iyeesa taasisani achumaan akkuma namichii Waaqayyoo jibe sun Malas Zenawi wa’ee Oromo “saba lakkofsi issa bayyee xiqeesun salphadha” jedhe kakate, oladeemtota Oromo fixaa jiru. Kan TPLF hin beekin garu, akkuma Oromoo ajjecha deemtu, Oromoon tokko ta’ee kibba hamma kabaati dhi’aa hamma ba’aati kuno diina olachisa jira.
Alaaban ABO jaal Elemo Qilxuufa bara 1973 qabatanii diina offira buqisanii Oromiyya Republika taate dhaabuf bosona (Tullu Carcar) seenan kuno dachee Oromiyya hunda irrati Oromoon qabatee “Abban Biyyaa Oromoo dha” “hormii nun bulchitu” Biyya keenya walaba taate nutu bulcha jedhee alaaba isa qabatee yeroo diini saba harqa duwa haqa isaaf falmatu, isaa harka diinati ajjefame, awaalate Alaaba ABO awaala irra dhaaba jira.
Mirgga mulqammaan deebisanii gonfachuuf Haatif ilmi hiriira ba’aani, gaafa loltu’un diina rasaasa itti roobiste mucaase ajjeftu, haati Oromticha sanaa “gumaan ilma kiyya bilisuma Oromiyya hata’u” jettee Oromiyyaati kutanoo ishe dhaamte.
Ebbisan , “siifan lolaa Oromoo narra hingortu? https://www.youtube.com/watch?v=2B3F0DnH6m0
Jettee kan atti akka gaafiti saba keeti dhi’eesinan diini si nyaate, garuu arra waamichi kee qeerro sibooda dhalataniin kan gegeefamu sabi kee deebisa jira.
Jaali kee, Usmaayyoo Musa waggaa sadeet (1995-2003) mana hidha diina keesati dararammaa ture eega ba’ee, saba durati gaffa as ba’uu sii (Ebbisa Adunya fi Dhugumaa Ayyana) yaadachudhan walisa isa jalqabe. Kan Usmaayyoo gaafas walise keesa:
Garbummaa manna du’a filane
Saniif finchillee dagala seenne
Seenadhaaf duuna lubbu hinqusannee
Usmaayyoo Musa, darara mana hidha diina keesati irra gayeen lubbun isa dargagummaati qurxame. Lubuun artistota Oromoo kunif kan isaan fakatan darbuun, hiri’ota isaanif dhalota isaan booda dhufe ibidda sammuu itti naqe.
Isaan booda artistoti dhibaan laqahaman sagallee isaani kan fagoo nama hawatu, ergaan saani ani Oromoo mittii? maalifan walaabummaa kootif hin lolu? jedhee kan samuu qirqidu, xiiqii qabachiisu, tokko ta’ee akkan diina biyyaa isa qabate irraati mormuu kan godhee keesa isa tokko. Artistooni Oromoo wallaansoo walaabummaa Oromiyyaa ta’aa jiruuf aarssaa isaan baasa turan/jiraan seena saba issani keesati bo’oo olaana qaba.
Jaalan: Elemo, Ebbisa, Usmaayyoo fi kan walaabuma Oromoofi kuftanii, sabi keesan akka damaqee waanjjo kolonii ofirra darbatee, biyya bilisa taate (sovereign state) ijaarachuf tarkaanfi xumura irra ga’aa jira. Yoo isin lubuun jiraatani saba keesan arguu baatan ille hojjin keesan Oromoo karaa walabummaati luucessera. Qeeransi Oromoo diina isa Oromiyyaa irra ari’a jira (https://www.youtube.com/watch?v=7tr04nYSafw) akkuma Mulluu Baqqaalaa wallifte.
Jaalan, maqaan keesan bara barran seena Oromoo keesa hajiraatu.
Qabsa’aan hindu’aa qabsoon Oromiyya Walaabuman xumurama.
Alemayehu Kumsa, Ph.D.
Previous Ibsa Koree Jidduu Kallacha Walabummaa Oromiyaa ( KWO)
Next Hanan Elemo Qilxu Support Fund